မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်ဆို သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ နေရာလွတ်အမြဲရှိကြောင်းကိုပြောလာတဲ့ Sinon – Cele Top Stars
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်ဆို သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ နေရာလွတ်အမြဲရှိကြောင်းကိုပြောလာတဲ့ Sinon
May 21, 2021 By admin2Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် Cat Walk King Sinon Loresca ကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုမို လူသိများအောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon က မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလာရောက်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင် ခဲ့သလို သူတတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူအတန်းတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နေရာစုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
လေးစားချင် စရာကောင်းတဲ့ သူ့ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့်လည်း အားလုံးက ချစ်ခင်နေကြတာပါ။Sinon က ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးသလို အပျော်တမ်းအခွီဗီဒီယိုလေးတွေလည်းရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်ပါ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သူရဲ့မွေးရပ်မြေကို ပြန်သွားရပေမယ့် မြန်မာပြည်ကို လွမ်းကြောင်း မကြာခဏ ဖော်ပြ ပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်…။
ဒါ့အပြင် Sinon က ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ အတူ အစွမ်းကုန် ရပ်တည်ပေးပြီး ရရာနေရာတွေကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်..။ အခုလည်း မြန်မာအတွက် သူရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ နေရာအလွတ် အမြဲရှိကြောင်းနဲ့ သတိရလွမ်းနေမိကြောင်းကို ” ငါ့ နှလုံးသားထဲမှာ မြန်မာအတွက် နေရာ လွတ်ကအမြဲရှိပီးသား အရမ်း လွမ်းတယ် မြန်မာ” ခုလိုရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်…. ။
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာပရိသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ဖိလဈပိုငျ Cat Walk King Sinon Loresca ကတော့ ခုနောကျပိုငျးမှာ ပိုမို လူသိမြားအောငျမွငျနတော ဖွဈပါတယျ။ Sinon က မွနျမာနိုငျငံ ကိုလာရောကျပွီး အနုပညာ အလုပျတှလေုပျကိုငျ ခဲ့သလို သူတတျနိုငျသလောကျလေး အလှူအတနျးတှကေိုလညျးနစေ့ဉျနရောစုံမှာ ပွုလုပျခဲ့ တာလညျး ဖွဈပါတယျ…။
လေးစားခငျြ စရာကောငျးတဲ့ သူ့ရဲ့အပွုအမူလေးတှကွေောငျ့လညျး အားလုံးက ခဈြခငျနကွေတာပါ။Sinon က ကွျောငွာလေးတှေ ရိုကျကူးသလို အပြျောတမျးအခှီဗီဒီယိုလေးတှလေညျးရိုကျကူးပွီး ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျရယျမောစနေိုငျခဲ့တဲ့ ဆယျလီတဈယောကျပါ။ အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ သူရဲ့မှေးရပျမွကေို ပွနျသှားရပမေယျ့ မွနျမာပွညျကို လှမျးကွောငျး မကွာခဏ ဖျောပွ ပေးနတောလညျးတှရေ့ပါတယျ…။
ဒါ့အပွငျ Sinon က ခုဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး မွနျမာလူမြိုးတှနေဲ့ အတူ အစှမျးကုနျ ရပျတညျပေးပွီး ရရာနရောတှကေနေ ပါဝငျလှုပျရှားပေးနသေူလညျးဖွဈပါတယျ..။ အခုလညျး မွနျမာအတှကျ သူရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ နရောအလှတျ အမွဲရှိကွောငျးနဲ့ သတိရလှမျးနမေိကွောငျးကို ” ငါ့ နှလုံးသားထဲမှာ မွနျမာအတှကျ နရော လှတျကအမွဲရှိပီးသား အရမျး လှမျးတယျ မွနျမာ” ခုလိုရေးသားဖျောပွလာပါတယျ…. ။
တော်လှန်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံလိုက်ရပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ရဲတိုက်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ
ခင်စံပယ်ဦးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လူမင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်